BOOSAASO(P-TIMES) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan gaar ah la yeeshay afar habeen kahor taliyayaasha ciidamada Somaliland oo uu hogaaminayo Jen, Nuux Taani Ismaaciil oo ay ka wada hadleen ka faa’iideysiga isbedelada gobalka iyo sidii dhammaan loo gaari lahaa xaduudaha maamulkaas sheeganayo ee ay la wadaagaan Puntland.
Ka dib kulanka ayaa laysku racay dhaqaajinta ciidamada Somaliland ee kusugan dhawr goobood oo kamid ah gobalka Sanaag, gaar ahaana Agagaarka Laas-qoray oo loo diro ciidamo cusub, kuwa Yube oo qabsada Hadaaftimo ilaa ay ka gaarayaan deegaanka Midigale ee gobalka Sanaag oo kaabiga ku haysa laamiga dheer ee isku xira gobalada Puntland.
Sidaas oo kale, Madaxweynaha Somaliland ayaa amray in dhaqdhaqaaq ciidan laga sameeyo magaalada Buuhoodle, isla markaasna ciidamada kusugan galbeedka Laascaanood la geeyo kaabiga Buuhoodle si ay uga qeyb noqdaan ciidamo kale oo kusugan deegaanka Qori-Lugud.
Qorshahan ayaa soo bilowday dhamaadkii sannadkii hore, waxaana Puntland wasiiro katirsan si buuxda loogu sheegay magaalada Wardheer ee gobalka Doolo, taas oo qeyb ka ahayd isbedelada siyaasadeed ee kasocda gobalka Geeska Afrika.
Madaxweynaha Puntland oo todobaadkan kasoo laabtay dalka Jabuuti ayaa horey u aqbalay in magaalada Buuhoodle lagu wareejiyo Somaliland, waxaana wada hadal uu la yeeshay xubnaha maamulka ee magaaladaas uu u sheegay in ay March xal kale u raadinayaan magaaladaas, taas oo ula jeeday in aysan saameyn ku laheyn maamulkiisa.
Taabagalinta qorshahan ayaa faa’iido weyn ugu jirtaa dhanka Somaliland, si ay u soo xiraan xaduudaha ay inta badan sheegaan in ay la wadagaan Soomaaliya, taas oo haddii ay hirgasho ka dhigan soo bixida Puntland kooban oo aan la micno aheyn Puntlandtii uu sannadkii hore bilowgiisii qabtay Madaxweyne Deni.